Hangover chirongwa kuvhura Windows mafomu paARM64 | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri vechirongwa chewaini Stefan Dösinger naAndré Hentschel waita chiziviso chekutanga yeruzhinji vhezheni yeHangover emulator, , que inobvumira kumhanya 32-bit uye 64-bit Windows application yakagadzirirwa x86 uye x86_64 zvivakwa muLinux uye Android nharaunda zvinoenderana neARM64 architecture (Aarch64).
Kupesana nekumhanya Waini ine diki sisitimu nharaunda uchishandisa QEMU mune yekuteedzera maitiro padanho rekufona nhanho (uchishandisa iyo imwechete kernel seyakanyanya system).
1 Nezve iyo Hangover emulator
1.1 Hangover Waini yeARM64
1.2 Pachine zvakawanda zveku polish
Nezve iyo Hangover emulator
Iyo purojekiti Hangover inobvumira mushandisi kugona kuve neakanyanya kuita kwakanyanya. Kufambisa kwechirongwa ichi inowanikwa kuburikidza nekuchinjisa iyo yekumusoro nhanho kune iyo Win32 / Win64 API nhanho, pachinzvimbo chekuteedzera wenguva dzose mafoni neWin32 / Win64 API post yekuteedzera kunoenderana navo.
Parizvino, chirongwa ichi chinobvumira mushandisi kumhanya chete zvakapusa kunyorera uye mitambo inoshandisa iyo Win64 uye Win32 APIs.
ZveLinux, rutsigiro rweDirect3D rwakaitwa, rwusati rwuripo kuApple nekuda kwesarudzo isina kukwana yeOpenGL ES muWine.
Debugger rutsigiro harupo uye kunze kwekubata kunozivikanwa mabhugi. Nekuda kwezvikonzero izvi, iyo kopi yekudzivirira uye anti-kubiridzira masystem anogona kunge ari mune yakaipa chimiro kupfuura mune zvakajairwa vhezheni yewaini.
Pakati pese, zvikumbiro makumi matanhatu nematanhatu zvinogona kutarisirwa kunge zviri muchimiro chiri nani pane makumi matatu nemasere maapplication nekuti hapana dhizaini yedhata yemhando ipi neipi inodiwa.
Kuvimbisa iro basa, kumisikidzwa kuisirwa waini kunoshandiswa, kunowedzeredzwa nemaraibhurari akasiyana siyana uye maLLL materu.
Munharaunda yeLinux, Windows zvinoshandiswa zvinomhanya zvoga kana QEMU iri mudhairekitori reWine ("C: \_ x86 \_ qemu-x86_64.exe.so").
Ipo, pa Android, zvinokurudzirwa kushandisa cmd chinoshandiswa kuita kuuraya.
Kero nzvimbo inganhurirwa ku4GB pakuchengetedza kero yega yega pazasi pe4GB.
Maraibhurari makuru ewaini akambotakurwa pamusoro pe4GB kuchengetedza nzvimbo iri pamusoro pazasi pe4GB semahara sezvinobvira. Chinhu chakadzikira pane izvi ndechekuti kutanga maitiro matsva kunotora anenge maviri masekondi.
Hangover Waini yeARM64
Waini inoona yega yega maitiro se64-bit maitiro, saka WoW64 yayo safu haina kushanda. Izvi zvinoshanda zvakanaka kune yakachena 32-bit kana yakachena 64-bit kunyorera, asi zvinokonzeresa matambudziko kune akavhenganiswa mafomu anotarisira mutsauko pakati, semuenzaniso, C: \_ windows \_ system32 uye C: \_ windows \_ syswow64.
Nezve kuburitswa kwe32-bit (x86) Windows zvinoshandiswa, zvinogadziriswa padanho rekushandura rezvivakwa zvinopfuudzwa pakati pekushandisa neWine (Iyo LLP64 modhi paWindows inochengetedza yakakosha masystem kuenderana pakati pe32-bit uye 64-bit WinAPI).
Kuti umhanye 32-bit Windows zvishandiso, 64-bit Waini magungano anoshandiswa uye yega yega maitiro anotanga kurapwa se 64-bit.
Padivi revagashiri, arm64 chete uye x86_64 zvivakwa zvinotsigirwa, asi kodhi yakabatana, ichibvumira chirongwa ichi kuendeswa kune mamwe maumbirwo mune byte odha kubva kumudiki kuenda kune mukuru (mudiki-endian) pasina kuyedza kukuru.
Pachine zvakawanda zveku polish
Kuita kwaHangover panguva ino kunosiya zvakawanda zvekuda. Sezvo eHuru bhodhoro ndiko kuita kwekodhi inogadzirwa neQEMU.
Zvisinei, paunenge uchimhanya pane Android Nvidia Shield TV mudziyo. Iko kuita kwakakwanira kumhanya mitambo kubva kuma2000.
Zvikumbiro zvakaedzwa paHangover zvinosanganisira Notepad ++, ANNO 1602, Zera reZvishamiso, Warhammer 40k: Kwayedza yeHondo, Iyo Settlers II yechi10 Chiitiko, Muchinda wePersia 3D, Worms 2, uye Worms Amagedhoni. Iyo DirectX 9 SDK mienzaniso inomhanyawo neyakagamuchirwa kumhanya.
Kuburitswa kwakavakirwa paWine 4.0 base kodhi, iyo inoratidzwa mune Hangover 0.4.0 vhezheni nhamba. Iyo yekumusoro dura yakavakirwa pane iyo QEMU chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Hangover chirongwa kuvhura Windows mafomu paARM64